Ngaba Bonke Abantu Banethuba Lokumazi UThixo? | Imibuzo Yabafundi
Ngaba Bonke Abantu Banethuba Lokumazi UThixo?
Xa wayebuzwa ukuba nguwuphi owona mthetho mkhulu, uYesu wathi: “Uze umthande uYehova uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela nangomphefumlo wakho uphela nangengqondo yakho iphela.” (Mateyu 22:37) Noko ke, ngaphambi kokuba abantu bamthande uThixo, kufuneka bamazi kakuhle. (Yohane 17:3) Ngaba sonke siya kuze simazi kakuhle?
Incwadi esenza simazi kakuhle uThixo yiBhayibhile. (2 Timoti 3:16) Kumazwe amaninzi iBhayibhile ifumaneka lula yaye abantu basenokukhuthazwa ukuba bafunde iBhayibhile rhoqo ukuze bafumane ulwazi oluchanileyo ngoThixo. (Mateyu 28:19) Abanye bakhuliswa ngabazali abangamaKristu, abasoloko bebafundisa ngoThixo abantwana babo.—Duteronomi 6:6, 7; Efese 6:4.
Noko ke, abanye abasoloko bewafumana amathuba afana nalawo. Abanye abantu baye baxhatshazwa baza abathandwa ngabazali babo. (2 Timoti 3:1-5) Kusenokuba nzima kubantu abakhuliswe kanjalo ukumjonga uThixo njengoBawo wasezulwini onothando. Abanye abayanga kangako nasesikolweni, nto leyo ebenza bangakwazi ukuyifunda kakuhle iBhayibhile. Kuphinda kubekho nabanye abaye bamfanyekiswa ziimfundiso zonqulo lobuxoki okanye bahlala kwiintsapho, imimandla okanye amazwe apho bengavunyelwayo abantu ukuba bafunde iBhayibhile. (2 Korinte 4:4) Ngaba iimeko zabo bantu ziyabathintela ukuba bafunde ngoThixo baze bamthande?
UYesu wavuma ukuba iimeko zabanye abantu ziya kwenza kube nzima ukumthanda nokumthobela uThixo. (Mateyu 19:23, 24) Noko ke, uYesu waxelela abafundi bakhe ukuba nangona kusenokubakho iimeko eziyimiqobo kwimpumelelo yabantu, “kuThixo izinto zonke zinako ukwenzeka.”—Mateyu 19:25, 26.
Khawuqwalasele ezi zibakala zilandelayo: UYehova uThixo uye wenza ukuba iLizwi lakhe iBhayibhile libe yeyona ncwadi isasazwa ngaphezu kwayo nayiphi na enye. IBhayibhile yaxela kwangaphambili ukuba iindaba ezilungileyo ngoThixo nenjongo yakhe ngomhlaba ziya kushunyayelwa “kuwo wonke umhlaba omiweyo.” (Mateyu 24:14) Namhlanje amaNgqina kaYehova ashumayela ezo ndaba zilungileyo kumazwe angaphezu kwama-230 yaye enza uncwadi oluthetha ngeBhayibhile ngeelwimi ezimalunga nama-500. Kwanabo bangakwaziyo ukufunda iBhayibhile banokufunda okungakumbi ngoThixo oyinyaniso ngokondela izinto azidalileyo.—Roma 1:20.
Ukongezelela koko iLizwi likaThixo lithi: “UYehova uyazigocagoca zonke iintliziyo, akuqonde konke ukutyekela kweengcamango. Ukuba uthe wamfuna, uya kumfumana.” (1 Kronike 28:9) Ngoko ke nangona uYehova engathembisi ukuba bonke abantu baya kuba nethuba elifanayo, uyaqiniseka ukuba bonke abantu abanyanisekileyo baya lifumana ithuba lokufunda ngaye. Uya kude avuse nabantu abafa bengazange balifumane elo thuba ukuze bafunde ngaye kwihlabathi elitsha.—IZenzo 24:15.